Xulkeena Somalia oo 4-1 lagu garaacay ciyaar saaxiibnimo. - Caasimada Online
Home Warar Xulkeena Somalia oo 4-1 lagu garaacay ciyaar saaxiibnimo.
Xulkeena Somalia oo 4-1 lagu garaacay ciyaar saaxiibnimo.
Tababare Sam Ssimbwa ayaa akoonka guul darrada u furay xulka Somalia markii xidigaha Ocean Stars ay 4-1 guul darro ah kala kulmee Sports Club Victoria University kulan saaxiibtinimo oo lagu ciyaarayey Namboole Stadium talaadadii.
Tani waxay qeyb ka aheyd isku diyaarinta Somalia ee bishaan koobka Cecafa Tusker Cup kaasoo sabtida ka bilaaban doona Kampala.
Ssimbwa, ayaa doonayey inuu arko bal sida ay ciyaartoydiisu u ciyaarayaan ka hor bilowga koobkaan laakiin guul darro qaraar ayaa kasoo gaartay Victoria, iyadoo uu keliya Somalia leylinaayo inta uu socda Cecafa.
Ilic Milos iyo laba gool oo ka timid Lawrence Bakiranze iyo gool kale oo uu dhaliyey Patrick Owori ayaa guusha u sahlay kooxda ka dhisan Uganda, waxana goolka keliya ee Somalia dhaliyey Yusuf Mohammed.